Ikhowudi yeprogram yimiyalelo ebhaliweyo yomntu kwiikhomputha
Inkqubo yindlela yokudala eyalela ikhomputha malunga nendlela yokwenza umsebenzi. I-Hollywood iye yanceda ukufaka umfanekiso wabalingisi njengama-techies angabonakaliyo abangahlala phantsi kwikhompyutheni baze baphule yonke iphasiwedi ngemizuzwana. Ukunyaniseka akuyona nto inomdla kakhulu.
Ngaba Iprogram Iyabhaxabisa?
Iikhompyutyana zenza oko zitshoyo, kwaye imiyalelo yabo ivela kwifom yeenkqubo ezibhalwa ngabantu. Abaninzi beekhompyutheni zekhompyutheni babhala ikhowudi yomthombo onokufundwa ngabantu kodwa kungekhona ngeekhomputha.
Kwiimeko ezininzi, loo khowudi yomthombo iququzelelwe ukuguqulela ikhowudi yomthombo kwikhowudi yomshini, engafundwa yiikhomputha kodwa kungekhona ngabantu. Ezi ziilwimi zeenkqubo zekhompyutha ziquka:
Ezinye iinkqubo akudingeki ukuba zihlanganiswe ngokwahlukileyo. Kunoko, iqulethwe yinkqubo ye-in-time kwikompyutha apho isebenza ngayo. Ezi nkqubo zibizwa ngeenkqubo eziguqulelwe. Ukutolika ngokubanzi kwiilwimi zeprogram ziquka:
Iilwimi zokuhlela nganye zifuna ulwazi ngemithetho yabo nesigama. Ukufunda ulwimi olutsha lwenkqubo lufana nokufunda ulwimi oluthetha olutsha.
Ziziphi iiprogram ezenzayo?
Iiprogram ezisisiseko ziqhuba amanani kunye nokubhala. Ezi zezibhloko zokwakha zonke iiprogram. Iilwimi zoLungiselelo mazivumele ukuba uzisebenzise ngeendlela ezahlukeneyo ngokusebenzisa amanani kunye nokubhaliweyo kunye nokugcina idatha kwi disk yokubuyisela emva koko.
Ezi manani kunye neetekisi zibizwa ngokuba yii-variables , kwaye ziyakwazi ukusingathwa kwi-singly okanye kwiziqokelelo ezihleliweyo. Ku-C ++, uguquko lunokusetyenziswa ukubala amanani. I- struct variable kwi khowudi inokubamba iinkcukacha zokuhlawula umqeshwa njengomqeshwa:
Inombolo ye-Id yeNkampani
Iyonke Intlawulo ehlawulwayo
I-database ingabamba izigidi zala marekhodi kwaye zilandele ngokukhawuleza.
Iinkqubo zibhalwa kwiinkqubo zokusebenza
Nganye ikhomputha inenkqubo yokusebenza, eyona yinkqubo. Iiprogram ezisebenzayo kule khomputha kufuneka zihambelane neenkqubo zayo zokusebenza. Iinkqubo zokusebenza ezidumile ziquka:
Ngaphambi kweJava , iiprogram zafuneka zifakwe ngokwezifiso kwinkqubo nganye yokusebenza. Inkqubo eqhutywa kwiikhompyutheni ye Linux ayikwazanga ukusebenza kwiikhompyutheni yeWindows okanye kwi-Mac. NgeJava, kunokwenzeka ukuba ubhale inkqubo ngokukhawuleza uyiqhube kuyo yonke into njengoko iqulunqwe kwikhowudi eqhelekileyo ebizwa ngokuba yi- bytecode , echazwa ngoko. Inkqubo nganye yokusebenza inomtoliki we-Java ebhaliweyo kwaye uyakwazi ukutolika nge-tecode.
Inkqubo enkulu yekhompyutheni iyenzeka ukuhlaziya izicelo ezikhoyo kunye neenkqubo zokusebenza. Iinkqubo zisebenzise iinkalo ezinikezelwa yinkqubo yokusebenza kwaye xa ezo zitshintsha, iinkqubo kufuneka zitshintshe.
Ukwabelana ngeNkqubo yoPhuhliso
Abaninzi abaprogram babhala isofthiwe njengento yokudala. Iwebhu igcwele iiwebhsayithi enekhowudi yomthombo eyenziwa ngabaprogram bamatye abenza oko kumnandi kwaye bayonwabile ukwabelana ngekhowudi yabo. I-Linux yaqala ngale ndlela xa uLinus Torvalds eyabelana ngekhowudi ebhaliweyo.
Umzamo wengqondo ngokubhala inkqubo ephakathi nendawo ifaniswa nokubhalwa kwincwadi, ngaphandle kokuba ungalokothi uphukise incwadi.
Iiprogram zekhompyutha zifumana uvuyo ekufumaneni iindlela ezintsha zokwenza into ethile yenzeke okanye ekuxazululeni ingxaki enameva.
I-C ++ Ukusingatha ii-Ints kunye ne-Floats
Iingcali ezi-8 zeChristinest Scientific
Ukutshatyalaliswa komlilo Inkcazo
I-Car Car Classic Akukho I-Crank Akukho Qala
Indima yeNgqungquthela kwi-US Foreign Foreign Policy
Amaqiniso Ngama-Ankylosaurus, iDinosaur enezikhali
Kutheni Uqeshisa I-Flat Flat eJamani yiNdawo eQhe lekile